China mitambo indasitiri kuwedzera sezvo makambani titsvake mikana mitsva kukura - China Tianjin Shengxin Sports Goods
Shenzhen - Kufambirana wakasimudza inzwi uye rakadzikama kumhanya okukura, vokuChina yemitambo indasitiri akanga kuwedzera muna 2016 sezvo makambani vakaedza kufukidza rakasiyana-siyana vemabhizimisi, apo kuwana injini itsva kudzinga kukura.
Policy vaifarira indasitiri
China State Council rakapa gwaro muna 2014 kutungamirira kukura yemitambo bhizimisi uye kusimudzira nemitambo rinodyiwa. No 46 faira rave aionekwa somunhu chinhu chinokosha pamusoro indasitiri wacho ichikwira kare.
Dzematunhu policies, inobva National gwaro, rakanga rabudiswa panguva 2015 munzvimbo dzakasiyana, uye zvakajeka matanho akatorwa uye guta uye County mumatunhu.
The General Administration pamusoro Sport yakabudisa rechi13-gore Five Plan pamusoro yemitambo indasitiri July ichi, uye nezvimwe Satellite magwaro anenge 22 kutsigira urongwa. Zvinyorwa izvi tsanangura kuti mitambo indasitiri kuchaita pfuura 3 tiririyoni Currencykuva ($ 432 billion) pagore 2020. The Indasitiri wacho akawedzera ukoshi vanotarisirwa kuti varove chimwe muzana GDP, uye mitambo vapera anotarisirwa kuti varove 2,5 muzana kuraswa mari chete capita panguva iyoyo .
The National Fitness Program (2016-2020) uye Healthy China Outline (2030) vakanga rakapa gore rino kupa yakajeka kuti National nzira ine vagari 'kugwinya uye utano uye nokuda vakwanise mitambo bhizimisi pamwe.
The State Council akataurawo matambudziko ari chinzvimbo kwakabva pamusoro gym yokufaranuka uye mitambo maindasitiri, kupa mirayiridzo kuna huru mabasa mberi mune mirayiridzo National ayo rakapa ichi October.
Uyewo, General Administration pamusoro Sport, dzakanyora pamwe chete dzakawanda dzimwe nyika yehurumende madhipatimendi, rakabudiswa policies uye urongwa gore rino zvemitambo muchando, mvura mitambo, aero AND mitambo, makomo panze zvemitambo uye mamwe mabasa.
policies izvi kuti chokuita zvemitambo indasitiri hadzisi kwepfuti murima; vari panguva imwecheteyo sezvazviri, hunoshanda uye nenheyo. Vakaisa panze ritiudze kuti kukura Chinese yemitambo indasitiri mumakore anouya.
Kuchera pamusoro IP, mari akaenda vakwanise
Nenzira ndezvokuti rakasiyana pose kutenga vavimbezve kuona gore rapera, Chinese mitambo vanoita inoita vakatanga kuita nokungwarira muna 2016 uye kuti vatsvake nzira nani bhizimisi.
China chitoro hofori Suning Group awana ane 70 muzana rokutambudzikira Italian football tsvimbo Inter Milan, vakawedzerwa mutengo euros miriyoni 270 ($ mamiriyoni 282), zvichida chinonyanya chimedu nhau kuti ubude yemitambo bhizimisi gore rino.
Zvichakadai, achiwedzera guru akakora kuti guta dziri kuchinja kuti bhizimisi racho chikuru kuti motokari kukwira musika ukoshi mitambo akaidza.
kuratidzwa pasocial network kambani China Tencent chibvumirano ne FIBA, achiva kwayo pamusoro shamwari nokuda mapfumbamwe akatevera. The mushandirapamwe pakati FIBA ​​uye Tencent kuchaitika muminda pasocial network, online kubhadhara, online kumhanyira uye e-zvokutengeserana.
The Kukura kushanda pamwe chete nokusingaperi-kuwedzera. Chinese Real Estate hofori Wanda Group raratidza muenzaniso chete tikabatana pamwe FIBA ​​munyika yose kutsigira nemari, kusanganisira kutengeswa kutyora kodzero uye pasi pose yokutengesa kodzero kuti nguva mana Basketball World Cup, kusvikira 2033.
Kudyidzana vari kutumbuka pamusoro wechipfuwo mberi uyewo. Chinese e-zvokutengeserana zvakasimba Ali Sports akatora pamusoro chete TV kodzero CUBA (Chinese University Basketball Association). Online Video kambani Storm Sports rakawedzerwa bhizimisi rayo zvinosanganisira CBA (Chinese Basketball Association) mhenyu nhepfenyuro. Zvinotarisirwa kuti makwikwi nekuda CBA kuti TV kodzero vachava vakaoma zvikuru uye kunotyisa muna 2017, mushure CBA vaumbe pachavo boka raro gore rino.
Wanda Group achaita chikwata noMweya Chinese Football Association kuronga China Cup Soccer Tournament muna 2017, achivimbisa kuti rive rinozivikanwa sangano mune ramangwana. Zvichakadaro Suning boka akaita mari huru vanotenga kodzero TV nokuda Chirungu kuratidzwa League, uye Ti'ao Dongli, kodzero wokuisira nokuti Chinese Super League (Pfuma) wakadzikwa yayo TV nhepfenyuro centre.
Kuwedzera IP mabhizimisi, mitambo upfumi vakaenda rakasiyana-siyana nzvimbo mhiri indasitiri. Maererano kuongorora gwaro zvemitambo mari uye mari kuburikidza nekubvunza mumiririri Sports Bank, mari akaenda zvirongwa nhandare oparesheni, zviitiko zvemitambo yokutengesa, mitambo nhau, mukusimbisa muviri, kurovedza muviri uye nemitambo ushanyi. Mushure mukuwana mari, zhinji startups mabhizimisi vari kuvavarira kuti pakuzadzisa nokuita inokosha dambudziko kuhwina zvakawanda vatengi.
Zhong Bingshu, wechikoro panguva Capital University of Chaiko Education uye Sports, akaudza Xinhua kuti zvinyorwa mahombe guta vane nzara mazita saizvozvo guru uye netsvimbo kuumba kudyidzana naye, asi anoona gore pamusoro-gore chaishanda musika maitiro.
"A yakawanda guta akamhanyira yemitambo maindasitiri, kunyanya munzvimbo dzine dzemitambo uye kudyidzana netsvimbo nomukurumbira 2015. Iyi Muitiro rave seiyi muna 2016. The vanoita vava kupfuura musoro uye vari kufunga kuwana mari. Kuwedzera dzemitambo, pane zvizhinji yokutengesa kuitwa gym yokufaranuka uye mitambo, "Zhong vakacherechedza.
'Sports +' upfumi
Cross-indasitiri kusangana chimwe chezvinhu pachena zvaiva Chinese yemitambo indasitiri anenge akawedzera musika kupinda paminda tourism, tsika, dzidzo, mishonga, uye pasocial network. Kukura vakwanise indasitiri asisiri rinonyanya kumativi chete zviitiko pachavo; nzvimbo itsva zvinogona kukura Munotadzanura zvitsva zvinobvira. nzira izvi muchinjikwa-indasitiri pamwe vanozivikanwa se 'mitambo +' mikana.
Tora mitambo + Tourism somunhu muenzaniso. vanhu mamiriyoni 3.38 vaiita zvimwe 311 mitambo kubva Jan kusvika April gore rino, unoparadza dzinokwana bhiriyoni 11.9 Currencykuva ($ 1,7 billion) munyika motokari, kutaura, hotels, Eenhede, uye mamwe mabasa.
Official Pfuma date inoratidza kuti avhareji vateereri kukura chete mutambo mwaka uyu wakange 2,000 kupfuura 2015. Kunze kuona mitambo kurarama, vakawanda mafeni dzirikutaririra mitambo Indaneti. Kuitikawo anooneka basketball, nevolleyball uye tafura Tennis.
The 'mitambo +' bhizimisi inoda kukurira zvaaisakwanisa ayo panguva iyi mangwanani padanho racho kukura. Vazhinji Makambani mitambo vasingakwanisi kuwana zvaunoda mutero policies uye dzimwe mitemo yomunzvimbo nemirayiro vari lag kure shure kukura indasitiri.
Mitambo Songaniro, huzhinji vasina kudzorwa uye akaita kupinda asiri ehurumende zvomukati, vane simba ruoko kuridza Pakukurukura indasitiri. Zvichakadaro, kushaya mitambo kwezvivako achiri dambudziko guru mumaguta akawanda.
Kuenda mberi, indasitiri vanamazvikokota vanoti kuti bhizimisi mitambo, sezvo vachangobva achifumira nyeredzi upfumi China, zvinoda kushivirira uye maitiro anoudzwa nemutariri dzinokosha tsvakurudzo pamusika pane kubhejera chete yakawanda guta kundotsvaka nokukurumidza kubudirira uye zvakanakira pakarepo.